Izindaba - Izinzuzo Zamapayipi e-PVC
Izinzuzo Zamapayipi e-PVC
Amapayipi e-PVC athatha amapayipi e-PVC-U ukuhambisa amanzi, enziwe nge-polyvinyl chloride resin njengempahla eyinhloko eluhlaza. Ziyangezwa ngezithasiselo ezidingekayo futhi zakhiwa ngokucubungula i-extrusion. Ipayipi lamanzi lokwakha elinamandla aphezulu, ukuzinza okuhle, impilo ende yokusebenza nokusebenza kwezindleko eziphezulu. Ingasetshenziswa ekwakheni amanzi, ipayipi lendle nohlelo lokungenisa ipayipi.
Izinzuzo zepayipi le-PVC zingokulandelayo:
1. Inamandla aqine futhi acindezelayo futhi iphephile.
2. Ukumelana okumanzi okuncane:
Udonga lwepayipi le-PVC lubushelelezi kakhulu futhi ukumelana noketshezi kuncane kakhulu. I-coefficient yayo yobunzima yi-0.009 kuphela. Amandla ayo okulethwa kwamanzi angakhuphuka ngama-20% uma kuqhathaniswa nepayipi lensimbi elifana nobubanzi obufanayo nelingaphezulu ngama-40% kunepayipi likakhonkolo.
3.Ukuphikisana nokugqwala okuhle kakhulu nokumelana namakhemikhali:
Amapayipi e-PVC anokumelana okuhle kakhulu kwe-asidi, ukumelana ne-alkali, ukumelana nokugqwala. Abathintwa umswakama nenhlabathi PH. Akukho ukwelashwa okubulala amagciwane okudingekayo ekubekweni kwepayipi. Ipayipi linokumelana okuhle nokugqwala kuma-acid angaphili, ama-alkalis nosawoti. Kufanelekile ukukhishwa kwendle yezimboni nokuhamba.
4. Ukuqina kwamanzi okuhle: Ukufakwa kwamapayipi e-PVC kunokuqina kwamanzi okuhle noma ngabe kuhlanganisiwe noma kuxhunywe iringi yenjoloba.
5. I-Anti-bite: Ipayipi le-PVC akuyona indawo yokudla okunempilo, ngakho-ke ngeke igugulwe amagundane. Ngokwesivivinyo esenziwe yiNational Health Foundation eMichigan, amagundane awakwazi nokuluma amapayipi e-PVC.
6. Ukumelana okuhle nokuguga: Impilo yesevisi ejwayelekile ingafinyelela ngaphezu kwama-50.
Isizathu sokufaka amapayipi e-PVC akuyona nje izinzuzo zokusebenza ezingenhla. Isisindo sayo esincane singagcina izindleko zokuhamba zemishini esindayo futhi sinciphise kakhulu isikhathi sokumba izimbobo emapayipini. Noma ngabe kukuzamazama komhlaba noma kwezinye izimo, amapayipi e-PVC angakhona angaqinile. Lokhu kwenza ipayipi le-PVC laba basekeli abaningi ngokwengeziwe.
Isikhathi Iposi: May-19-2021